Wal Hubannaan Yoo Jiraate Hookkarri Ka’uu Hambisa
Fulbaana 25, 2012
Hiriirri mormii fiilmii US keessati hojjetame kan farra Islaamaa ilaalchisuun giddu galeessa bahaa fi addynyaa Islaamaa keessatti ka’e hubannoo dhabuun ta’uu Imaamiin as naannoo Wahsington DC tokko ibsanii jiran.
Shiek Kalid Mohamed akka ibsanitti as Ameerikaa keessatti yaada ofii walaba ta’anii ibsuun waan jiruuf namooni yaada isaanii dubbatu. Haa ta’u malee namoonni dhuunfaa waan hojjetaniif mootummaa balaaleffachuun sirrii miti jedhan.
Fiilmiin farra Islaamaa kun akka Islaama tokkootti kan isaan mufachiise ta’uu Sheik Kaliid Ibsanii hawaasi musliimaa akka tasgabbaa’u waamicha dabarsaniiru. Gaaffii fi deebii guutummaa isaa mallattoo sagalee armaan gadii tuquun dhaggeeffadhaa.
Gaaffii di Deebii dhaggeeffadhaa